Awoodda suuqa ee mootada bajaajleyda waa mid aan la qiyaasi karin, oo abuureysa fursado aad u fiican
Shiinaha ayaa galay darajooyinka soosaarayaasha waaweyn ee adduunka, laakiin marka laga fiiriyo guud ahaan xoogga iyo heerka horumarka, soosaarka sanadlaha ee Shiinaha ee mootooyinka dhugdhugleyda waa kaliya 1/5 dalalka horumaray adduunka, iyo inta badan mootooyinka mootooyinka ayaa ah wali caalami ahaan Iyadoo aan laga gudbin heerka C, heerka suuqyada caalamiga ah ee silsiladaha Shiinaha ayaa kaliya ah qiyaastii 4.5%, sidaa darteed Shiinaha wali wuu ka fog yahay inuu galo safka awoodaha isdaba-marinta adduunka. Sidaa darteed, waa jihada ugu weyn ee horumarka warshadaha wax-soo-saarka ee Shiinaha si looga guuro dal wax soo saaraya una wareego quwadda adduunka oo la qaado waddo warshadeed cusub oo leh astaamo u gaar ah.
In kasta oo suuqyada caalamiga ah ay saameeyeen arrimo aan la hubin oo aan la saadaalin karin, iyadoo horumarka joogtada ah iyo hal-abuurka otomaatiyada warshadaha adduunka, baahida loo qabo alaabada isdaba-joogga ahi way sii weynaan doontaa oo ka sii weynaan doontaa. Gaar ahaan jeexjeexyada ayaa ah alaab xoog badan. Waxay qaadataa habka wax soo iibsiga adduunka ama waxay u weecataa wax soo saarka dalalka soo koraya, sprocket-ku waa badeecad dhaqameed Shiineys ah. Weli waxay leedahay faa'iido gaar ah oo tartan ah oo ka badan dalalka kale ee soo koraya, taas oo keeneysa fursado cusub iyo meel horumarineed oo loogu talagalay Shiinaha si uu u sii ballaariyo dhoofinta. Waqtigan xaadirka ah, suuqyada wax lagu kala iibsado waxay u qaybsan yihiin saddex darajo: hoose, dhexdhexaad iyo sare, oo muujinaya isbeddelka aasaasiga ah ee "fasalka hoose ayaa leh dalab, fasalka dhexe wuxuu leeyahay macaan, iyo fasalka sare oo rajo leh". Si kastaba ha noqotee, isweydaarsiga Shiinaha wali ma uusan soo galin marinka suuqa fasalka sare.
Horumarinta warshadaha wax soo rida ayaa leh taariikh dheer, rajooyinka horumarineed ee hadda jira sidoo kale waa kuwo aad u ballaaran. Laga soo bilaabo horumarka guud ee warshadaha isdaba-marinta, sprocket-ka caadiga ah ayaa si tartiib tartiib ah u yaraanaya isla markaana baahida suuqa ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhici doonta; aan caadi ahayn sprocket Baahida loo qabo alaabada iyo saamiga suuqa ee sprocket-ka oo dhan ayaa si weyn kor ugu kici doona. Waa in la sheegaa in jeexjeexyada aan caadiga ahayn ay yihiin jihada horumarineed ee dhammaan badeecada jeexjeexa. Awooddeeda suuq waa weyn tahay waxayna leedahay rajo ballaadhan oo horumarineed. Isla mar ahaantaana, maxaa yeelay wareegga suunka isku midka ah wuxuu leeyahay labadaba faa'iidooyinka gudbinta giraangirta suunka iyo astaamaha gudbinta qulqulka, saamiga suuqa ee isku-dhafka suunka isku-dhafan ee dhammaan sheyga gudbinta silsiladda ayaa si weyn kor loogu qaadi doonaa, iyo himilooyinkiisa horumarineed sidoo kale noqon doonaa mid aad u rajo wanaagsan. Awoodda suuqa ayaa noqon doonta mid aan la qiyaasi karin.
Gawaarida aan caadiga ahayn iyo giraangiraha suunka isku midka ah waxay matalaan jihada horumarka mustaqbalka iyo isbeddelka guud ee horumarka ee taxanaha taxanaha iyo qaybaha kale ee gudbinta. Awooddooda suuqa waa mid aad u ballaaran oo leh rajo horumarineed oo aad u ballaaran. Sprocket waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa gudbinta farsamada kiimikada, mashiinnada dharka, soosaarida cuntada, qalabka, batroolka iyo warshadaha kale. Habka wax soosaarka ee jeexjeexanku wuu deminayaa oo dusha ayaa madoobaaday. Marka saamiga xawaaruhu hooseeyo, iyadoo la adeegsanayo sprocket tiro-ilig sare leh ayaa si weyn u yareyn kara xaddiga wareegga i xiriiriyaha, culeyska silsiladda silsiladda iyo culeyska qaadista. Jeex jeexjeexyada birta ah waxaa badanaa loo isticmaalaa jeexjeexyada leh shuruudo saxsan oo hooseeya ama qaabab isku dhafan, sida soosaarka giraangiraha giraanta. Sidaa darteed, warshadaha sprocket-ka waxay leeyihiin rajo ballaadhan oo xagga horumarka iyo codsigaba ah.